Tirada Dad Loo Qabqabtay Rabshadihii Ka Dhacay Ethiopia | Baligubadlemedia.com
Tirada Dad Loo Qabqabtay Rabshadihii Ka Dhacay Ethiopia
Inta la og yahay 78 qof ayaa ku dhintay rabshadihii dhawaan ka dhacay dalka Ethiopia, halka Ciidamada Booliska itoobiya ay sheegeen in ay qabqabteen dad gaadhaya 409 Qof xabsiga dhigtay, markii lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen rabshadihii dhowaan ka dhacay meelo badan oo ka tirsan Gobolka Oromiya.
Belene Seyoum Woldeyes, oo u hadashay xafiiska Ra’iisal Wasaaraha ayaa sheegtay in maalmaha soo socda ay sii kordhi karto tirada haatan loo hayo rabshada dalkaasi ka dhacay welina ay socdaan howl-gallada lagaga hor tagayo qaswadayaasha.
Rabshada uu Dhiig ku daatay ayaa dhowaan ka dhacay meelo badan oo ka mid ah dalka Itoobiya oo ay ku jirto magaalada ddis Ababa, markii ninka u ololeeya qaddiyadda Oromada ee lagu Magacaabo, Jawar Mohammed uu ku dhawaaqay kacdoon ka dhan ah Dowladda.
Belene Seyoum Woldeyes, waxa ay intaas ku dartay in ay sii socon doonaan qabqabashada dadka loo tuhumayo in ay ka danbeeyeen rabshadahaasi ka dhacay dalka Ethiopia.
Dhinaca kale Magaaladda Ambo oo waqooyi kaga beegan Magaaladda Addis ababa oo uu dhawaan safar ku tagay ra’isal wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy ahmed Cali ayaa lagu mudaharaaday, waxaana lagu soo waramayaa in ay dadka halkaasi ku sugnaa ay ku qaylinayeen weedho ay ka mid ahaayeen ha dhaco abi.